सावाँ–ब्याज भुक्तानीको म्याद थपियो, कुुन क्षेत्रमा कति म्याथ थप ? - Naya Pageसावाँ–ब्याज भुक्तानीको म्याद थपियो, कुुन क्षेत्रमा कति म्याथ थप ? - Naya Page
सावाँ–ब्याज भुक्तानीको म्याद थपियो, कुुन क्षेत्रमा कति म्याथ थप ?
काठमाडौं, ३० साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञा अवधिको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि थप गरिदिएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रवार चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्ने बताएको हो । त्यस्तो साँवा ब्याज आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने बताइएको छ ।
यो व्यवस्था कोभिड–१९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यसैगरि कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन २ लाख रुपैयाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिने बताइएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट